Conferize: ညီလာခံကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 16, 2013 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 8, 2018 Douglas Karr
ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်အခြားကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုလွဲချော်ရင်းကျွန်ုပ်ညည်းတွားမိသည်မှာကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများသည်စကားပြောနေခြင်း၊ ငါဆက်လုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးနဲ့တူတယ် ...
စကားပြော tagline ဖြင့်ပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်ပါသည် အခြားညီလာခံကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်.
သူတို့ကတစ် ဦး ထုတ်ဝေပါတယ် စာတမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ဖရင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နေရာ ၁၀ ခု -
ကွန်ဖရင့်များအတွက်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်း ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များကိုတည်နေရာ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ဘာသာစကားနှင့်အချိန်အလိုက်စီစစ်ရန်ကြိုးစားလျှင် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေမှုမအောင်မြင်သောဘဝကဏ္ an တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်ဖြစ်နိုင်သည် အလွန်ကြီးစွာသောကွန်ဖရပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေ တစ်နေရာရာမှာမင်းတောင်မှမသိဘူး ကျွန်တော်တို့ကိုကွင်းဆက်ထဲတက်ကြွစွာဆက်နေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်များလိုအပ်သည်။ ညီလာခံများကိုရှာဖွေမည့်အစားသက်ဆိုင်ရာညီလာခံများကကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာဖွေသင့်သည်။
အများဆုံး ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ ကျွန်တော်တို့ကို 1999 ရှိတယ်လို့ခံစားစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းပေါ်ကသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတွေကိုဖန်တီးရတာပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်။ စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်နည်းပညာအကြားကွာဟချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းကူးပေးသလဲ။
ပျမ်းမျှ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အချိန်နှင့်ငွေနည်းပါးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်တက်ရောက်လိုသောညီလာခံများသို့မကြာခဏသွားရန်ဆိုလိုသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘယ်လိုထိထိရောက်ရောက်ညီလာခံတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ အဲဒီမှာမရှိခြင်းမရှိဘဲ? ဝေးလံခေါင်သီသောဆက်သွယ်မှုတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူဤသည်သည်ယနေ့ဖြစ်သင့်သည်။
ရတဲ့ဟာအရမ်းခက်တယ် အသိပညာမှဝင်ရောက်ခွင့် ထုတ်လုပ်နှင့်ကွန်ဖရမှာပေးအပ်သည်။ ၀ က်ဘ်၊ လူမှုကွန်ယက်များ၊ အ ၀ င်ဘောက်များနှင့် hard drive များ၌ဖြန့်ကျက်နေသောအပိုင်းအစများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မင်းပုံရိပ်အပြည့်အစုံကိုဘယ်မှာရှာပြီးသင်အမှန်တကယ်ရှာနေတာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရေးယဉ်ကျေးမှုတွင်လူ ၂၀၀ ထက်ပိုသောလူတစ်ယောက်သိနိုင်ခြင်းသည်နေ့စဉ် ပို၍ သေးငယ်လာသည်။ နည်းပညာကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ စုပေါင်းဉာဏ်ပညာကိုရိတ်သိမ်းပါ နောက်လာမယ့်ညီလာခံကိုတက်နေတဲ့အံ့ minds စရာကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ့။
ဒီနေ့မင်းပုံမှန်အားဖြင့်တော့မသိဘူး ဘယ်သူကွန်ဖရင့်ကိုသွားမယ် သင်အမှန်တကယ်ရှိမရောက်မှီတိုင်အောင်။ ကွန်ဖရင့်အပြီးတွင်သင်တွေ့ဆုံဖူးသူနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်မကြာခဏပျက်ကွက်သည်။ အကယ်စင်စစ်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းရှိရမည်
လူများစွာအတွက်သူစိမ်းတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားစပြောဖို့ဆိုတာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာစနစ်တစ်ခုမရှိတာလဲ ကွန်ဖရင့်မတိုင်မီစကားစမြည်စတင်ပါပြီးရင်ကွန်ဖရင့်မှာပြီးရင်ပြီးရင်တောင်ဆက်ပါ ဦး ။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ရောက်ရှိနေသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဘ ၀ ကိုအဆက်မပြတ်မြှုပ်နှံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုကွန်ဖရင့်၌ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။ ငါတို့သည်အဘယ်သို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆူညံသံအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖန်တီးပါ နက်ရှိုင်းသောလေ့လာသင်ယူမှုအတွက်အခြေအနေများကိုဖုံးကွယ်ထားပုံရသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်ကွန်ဖရင့်အောင်မြင်သနည်း။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ ညီလာခံ၏စစ်မှန်တဲ့သက်ရောက်မှုစီစဉ်သူများ၊ ဟောပြောသူများ၊ နေရာများနှင့်တက်ရောက်သူများအတွက်ကော၊ ကွန်ဖရင့်၌သုံးသောဒေါ်လာတိုင်းသည်အသားတင်ပြန်ငွေကိုသိသင့်သည်
sign up နှင့် Conferize အပေါ်ငါ့နောက်သို့လိုက် ဒါကြောင့်သင်တက်ရောက်နေတဲ့ညီလာခံတွေကိုငါသိဖို့၊ ငါဘယ်မှာငါပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့၊ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမီလိုက်နိုင်ဖို့ပဲ။
စက်တင်ဘာ 19, 2013 မှာ 7: 16 AM
မင်္ဂလာပါဒေါက်ဂလပ် - အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့။